Afkaa Xada Wuxuu Uurku Tabo, Aadna Uuma Roona – Rasaasa News
Afkaa Xada Wuxuu Uurku Tabo, Aadna Uuma Roona
Jan 5, 2010 Eritrea, Jwxo-shiil, ONLF
Odoroska Siyaasadeed ee boggaga u adeega Jwxo-shiil, waxaa ka muuqanaya, wixii ay jeclaan lahaayeen, balse aan suurto gal u noqonaynin kooxda uu horjoogaha ka yahay Jwxo-shiil.
Sida ay in badan oo idika mid ah la socoto, waxaa uu xidhiidh hoose u dhaxayn jiray Jwxo-shiil iyo madaxda ugu saraysa xukuumada Itobiya, xidhiidh kaas oo ahaa midkii keenay in uu qaloocdo habsami u socodka halganka ay waday Jwxo, oo markii ugu dambeeyeyna dhiiri galiyey in uu dhiig ka daadto ururka dhexdiisa.
Dilkii Dr.Dolal waxaa u ahaa hawlgal xoog badan oo ay ka wada qayb qaateen saddex qaybood oo midiba ujeedo gaar ah lahaa. Kuligoodna ay cadow u yihiin jiritaanka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] waxayna ahaayeen; xukuumadaha Eritrea, Itobiya iyo kooxda Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil, waxaa dhiri galiyey in uu ka qayb qaato dilkaas waxay ahayd isaga oo xidhiidh hoose la lahaa xukuumada Itobiya, kaas oo uu dilaal [broker] ka ahaa Cabdulahi Yusuf Axmed, dilaalnimadaas oo uu ugu dambayntii uu Jwxo-shiil kaga lunsaday Cabdulahi Yuusuf aduun dhan $200, 000. Jwxo-shiil, waxaa uu Cabdulaahi Yuusuf ku xansaday “in ururka ay kaga awood badan yihiin niman ka laan dheeraysan [reer Cabdile], ahana maskaxda ururka ONLF, uuna ku taagan yahay sidii uu ugala wareegi lahaa awooda ururka” waxaa yidhi Jwxo-shiil .
Eritrea, waxay aad u jeclayd in ay ku ciil baxdo kuna dhirbaaxyeyso colaada ay u qabto Itobiya, xoog ka yimaada dhulka Somalida Ogadeeniya oo isticmaalaya magaca ururka ONLF, waxayna aaminsanaayeen in uu Jwxo-shiil yahay ninka arintaas suurto galin kara, maadaama uusan halganka ONLF dan ka lahayn, waxayna noqotay in Dr. Dolal daaqada lagala baxo. Waxayna xukuumada Eritrea gacan ku siisay Jwxo-shiil sidii uu ga takhalusi lahaa Dr. Dolal inta uusan ubnaha Jwxo wax fahamsiinin.
Ururka TPLF ee xukuma Ethiopia, waxay aad u yaqaaneen mabaadiida Dr.Dolal, oo hore u diiday in uu wax la qaybsado iyaga oo aan wali dawlad noqonin horena yidhi “Itobiya wixii qabsadaa nooma kala sokeeyaan, marba hadii ayna ogolayn in ay ka go,do Ogadeeniya [shirkii London 1990]”. Sidaasi daraadeed Itobiya waxay u arkaysay in uu Dr.Dolal yahay cadowgeeda kowaad, madaama uusan aaminsanayn wax ka yar xornimo, hadii uu ka baxo saaxada siyaasadana ay Itobiya nafisi doonto, waxayna samaysay sidii loo khaarijin lahaa.
Arimahaas kala ujeedada ah ee ay aaminsanaayeen saddexdan qaybood waxay lid ku ahaayeen halganka ay waday Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo].
Waana tii keentay in ay gudaha Ogadeeniya ku wada ugaadhsadaan Dr. Dolal, oo kolkii dambe ku baxay gacanta ururkii ONLF ee uu abuuray Augusto 15, 1984, waxaana uu ku dhex dhintay isaga oo ku jira hawlo halgankii ku uu barbaaray January 17, 2009.
Dilka Dr.Dolal ka dib Jwxo-shiil waxaa uu muddo 8 bilood ah joogay gabalka Sool ee dalka Somaliya, waxaana uu saraakiisha Itobiya ka tuugayey in ay hirgaliyaan heshiiskii qarsoodiga ahaa ee uu hore ula galay madaxda ugu saraysa Itobiya. Waxaana loo sheegay Jwxo-shiil in uu yahay sarkaal Somaliyeed sharciguna ogolayn in ay heshiis kula galaan dhulka Somalida Ogadeeniya sarkaal ka yimi Jamhuuriyada Somaliya, ninkii ay heshiiska ka rabeena in la dilay.
Dhawr goor oo dambe oo ay ugu dambaysay dhacdadii Ina Dhuubo ee Denmark, ayey kooxda Jwxo-shiil isku dhabar jabisay in ay heshiis ka hesho Itobiya, si ay u muujiyaan ayidsanaanta Itobiya, waa kii aad maqasheen Maadey oo leh “Itobiyan baanu nahay xornimo naga maqana ma jirto xukun baanu doonaynaa, anaga iyo Oromana waanu midownay”.
Maanta meesha uu marayo halgankii uu waday ururka ONLF, waxaad ka ogan kartaa East Afrika, Jwxo-shiilna oo ahaa dugaalka duminta halganka waxaa uu ku oodan yahay Caasmara, dadkii uu ka dhashayna ma soo dhex gali karo sumcad xumo iyo dambiyada uu galay dartood.
Kolka ma idiin muuqdaa hadaaqa ay qortay Hanqadh.com, in uu yahay waxa ay jeclaan lahaayeen wiilasha HARADIGEED ee ku haraaday, kuna mutaystay colaada halganka ummada Somalida Ogadeeniya hoos jooga Jwxo-shiil.
Eebow Sanad Wanaagsn Nooga Yeel
Geeri Naxdin Leh oo ku Timid Mahad iyo Cabdifataax Xaaj Warfaa